??ခံတွင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျန်းမားရေးစစ်ဆေးမှု (Dental Check-Up) ၆လ၁ကြိမ်လုပ်ဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ?? | OnDoctor
??ခံတွင်းနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ကျန်းမားရေးစစ်ဆေးမှု (Dental Check-Up) ၆လ၁ကြိမ်လုပ်ဖို့ ဘာကြောင့်လိုအပ်တာလဲ??
By Wai Yan Lin	 On Jun 9, 2018
??ခံတြင္းနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီး က်န္းမားေရးစစ္ေဆးမႈ (Dental Check-Up) ၆လ၁ႀကိမ္လုပ္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္လိုအပ္တာလဲ??
?ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံေတြမွာေနထိုင္ရတဲ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြဟာ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ အခ်ိန္အမ်ားစုကိုေပးဆပ္ကာ လုံးပန္းေနရတဲ့အတြက္ တကိုယ္ေရက်န္းမာေရးကိုဂ႐ုစိုက္ဖို႔ေမ့ေနၾကတာမ်ားပါတယ္ ။
?သြားနဲ႔ပတ္သတ္တဲ့က်န္းမာေရးကိုလည္း ပိုလို႔ေတာင္သတိေမ့ေနေလ့ရွိၿပီး သြားနာသြားကိုက္ျဖစ္မွသာသြားေဆးခန္းကို သတိရေလ့ရွိပါတယ္ ။
?သာမန္သြားကိုက္သြားနာတာက ျဖစ္လာမွသြားေဆးခန္းမွာျပလိုက္လို႔ရေပမယ့္ ခံတြင္းကင္ဆာလိုေရာဂါဆိုးေတြအတြက္ကေတာ့ မျဖစ္ခင္ကတည္းကႀကိဳတင္ကာကြယ္ထားဖို႔လိုအပ္တယ္ဗ် ။
?ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီးအေနာက္ႏိုင္ငံေတြမွာ Dental check-up ကို ၆လ၁ႀကိမ္ပုံမွန္လုပ္ေလ့ရွိၾကပါတယ္ ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဆီမွာေတာ့ သြားနာမွသြားေဆးခန္းလာတဲ့ဓေလ့က အျမစ္စြဲေနတာေၾကာင့္ ျဖစ္ခါစမွာမနာပဲအခ်ိန္လြန္ကာမွ အရမ္းကိုဒုကၡေပးတဲ့ကင္ဆာလိုေရာဂါဆိုးေတြကို အခ်ိန္မွီကာကြယ္တားဆီးမေပးႏိုင္ေတာ့ပါဘူး ။
?ပုံမွန္ သြားႏွင့္ခံတြင္းက်န္းမာေရးစစ္ေဆးေပးျခင္းအားျဖင့္ ခံတြင္းကင္ဆာ၊ သြားပိုးစားျခင္း ၊သြားကိုက္ျခင္း ၊သြားဖုံးေရာဂါ ၊ ေရစီးကမ္းၿပိဳေရာဂါ ၊ သြားတိုက္တာနည္းစနစ္မမွန္ျခင္း စတာေတြကို မျဖစ္ခင္ကတည္းကႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးမွာပါ ။ သင့္ရဲ႕ခံတြင္းအေျခအေနနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးလည္း အေသးစိတ္သိႏိုင္မွာျဖစ္တာေၾကာင့္ ေဆာင္သင့္ ၊ေရွာင္သင့္တာေတြကိုလည္းေစာလွ်င္စြာသိထားႏိုင္ပါလိမ့္မယ္ ။
?ဒါေၾကာင့္လူတိုင္းက်န္းမာေစဖို႔အလို႔ငွာ ေရွးရႈၿပီး သတင္းစကားလက္ေဆာင္ေျပာေပးၾကဖို႔ တိုက္တြန္းပါတယ္ဗ်ာ ။
?ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်ရတဲ့ ကျွန်တော်တို့တတွေဟာ စားဝတ်နေရေးအတွက် အချိန်အများစုကိုပေးဆပ်ကာ လုံးပန်းနေရတဲ့အတွက် တကိုယ်ရေကျန်းမာရေးကိုဂရုစိုက်ဖို့မေ့နေကြတာများပါတယ် ။
?သွားနဲ့ပတ်သတ်တဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်း ပိုလို့တောင်သတိမေ့နေလေ့ရှိပြီး သွားနာသွားကိုက်ဖြစ်မှသာသွားဆေးခန်းကို သတိရလေ့ရှိပါတယ် ။
?သာမန်သွားကိုက်သွားနာတာက ဖြစ်လာမှသွားဆေးခန်းမှာပြလိုက်လို့ရပေမယ့် ခံတွင်းကင်ဆာလိုရောဂါဆိုးတွေအတွက်ကတော့ မဖြစ်ခင်ကတည်းကကြိုတင်ကာကွယ်ထားဖို့လိုအပ်တယ်ဗျ ။
?ဖွံ့ဖြိုးပြီးအနောက်နိုင်ငံတွေမှာ Dental check-up ကို ၆လ၁ကြိမ်ပုံမှန်လုပ်လေ့ရှိကြပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာတော့ သွားနာမှသွားဆေးခန်းလာတဲ့ဓလေ့က အမြစ်စွဲနေတာကြောင့် ဖြစ်ခါစမှာမနာပဲအချိန်လွန်ကာမှ အရမ်းကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကင်ဆာလိုရောဂါဆိုးတွေကို အချိန်မှီကာကွယ်တားဆီးမပေးနိုင်တော့ပါဘူး ။
?ပုံမှန် သွားနှင့်ခံတွင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးပေးခြင်းအားဖြင့် ခံတွင်းကင်ဆာ၊ သွားပိုးစားခြင်း ၊သွားကိုက်ခြင်း ၊သွားဖုံးရောဂါ ၊ ရေစီးကမ်းပြိုရောဂါ ၊ သွားတိုက်တာနည်းစနစ်မမှန်ခြင်း စတာတွေကို မဖြစ်ခင်ကတည်းကကြိုတင်ကာကွယ်ပေးမှာပါ ။ သင့်ရဲ့ခံတွင်းအခြေအနေနဲ့ပတ်သတ်ပြီးလည်း အသေးစိတ်သိနိုင်မှာဖြစ်တာကြောင့် ဆောင်သင့် ၊ရှောင်သင့်တာတွေကိုလည်းစောလျှင်စွာသိထားနိုင်ပါလိမ့်မယ် ။
?ဒါကြောင့်လူတိုင်းကျန်းမာစေဖို့အလို့ငှာ ရှေးရှုပြီး သတင်းစကားလက်ဆောင်ပြောပေးကြဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်ဗျာ ။
ဗီတာမင်စီ အကြောင်း ဘာတွေ သိထားလဲ????
ချစ်ခွင့်မရှိတဲ့ နှလုံးသားမှာအားငယ် (သို့မဟုတ်)…
အပျင်းထူတဲ့ မတ်မတ်တွေအတွက် tip ‌လေးတစ်ခု….